IPC: waa maxay sideese saameyn ugu yeelaneysaa maalgashiga? | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
IPC: waa maxay sideese saameyn ugu yeelaneysaa maalgashiga?
Jose recio | | Siyaasadda lacagta, Siyaasadda dhaqaalaha
Mid ka mid ah ereyada dhaqaale ee aadka loo isticmaalay xilligan waa IPC. Laakiin run ahaantii ma garanaynaa macnaheeda runta ah? Hagaag, waxay u dhigantaa soo gaabinta sicirka sicirka macaamiisha, waana qiimaha tiro ee ka tarjumaya kala duwanaanshaha qiimaha muddo cayiman. Iyada oo saameyn gaar ah ku leh suuqyada sinnaanta iyo isbeddelka qiimaha saamiyada. Marka laga eego xaaladdan guud, waxay noqon kartaa halbeeg lagu kalsoonaan karo oo lagu galo ama looga baxo suuqyada maaliyadeed iyadoo leh dammaanad gaar ah oo lagu guuleysto.
CPI sidoo kale waa macluumaad aad u muhiim ah oo loogu talagalay dib u eegista mushaharka iyo hawlgabka dalkeena. Go'aaminta go'aankeeda, gaar ahaan haddii heerarka sicirka macaamiisha ay aad u sarreeyaan. Xitaa si loo go'aamiyo siyaasadda lacagta dal ama aag juquraafi ahaan, marka la eego macnaha tusaalaha ugu fiican ayaa ah doorka Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB) uu horumarin jiray si kor loogu qaado kobaca aagga euro. Horena looga baxo dhibaatadii dhaqaale ee halista ahayd ee dhacday intii u dhaxaysay 2007 iyo 2008.
Dhinaca kale, tusmada qiimaha macaamiisha ayaa sidoo kale aad u go'aamineysa inay yeelato ilo tixraac waxa badanaa loo yaqaan "dambiisha wax iibsiga". Sababtoo ah saameyn ahaan, iyada oo loo marayo CPI waxaan ognahay sida qaybtaan muhiimka ah ee loogu yeero dhaqaalaha gudaha ay u kobcayaan. Si kastaba ha noqotee, waxay saameyn ku yeelan doontaa diyaarinta qoyska ama miisaaniyadda shaqsiyadeed, sida dadka isticmaala oo dhami ogyihiin. Sidaa darteed, sicirka sicirka macmiilku wuxuu leeyahay saameyn badan oo ka badan intaad qiyaasi karto bilowga.
1 Isbeddelka qiimaha macaamiisha
2 Saamaynta xun ee tusmada
3 Heerarka bulshooyinka ismaamula
4 Iswaafajinta Qiimaha Iswaafajinta (HICP)
5 Indices qiimaha kala duwan
6 Natiijooyinka ganacsiga ee suuqa saamiyada
Isbeddelka qiimaha macaamiisha
Qiyaasta sanadlaha ah ee Qiimaha Guud ee Sicirka Macaamiisha (CPI) ee bisha Janaayo waa 1,0%, laba meelood laba meelood ayaa ka hooseeya tii diiwaangashan bishii hore, marka loo eego heerarkii ugu dambeeyay ee ay soo saartay Machadka Qaranka ee Tirakoobka (INE). saameyn xun ee taagan hoos u dhaca heerka sanadlaha waa kuwan soo socda:
Cunto iyo cabitaanno aan khamri ahayn, taas oo hoos u dhigaysa kala duwanaanta sanadlaha ah afar meelood toban meelood oo ay dhigeyso 0,9%, sababo la xiriira xasilloonida qiimaha kalluunka iyo kalluunka, marka loo eego kororka diiwaangashan ee 2018. Waa in sidoo kale la ogaadaa, in kasta oo dhinaca ka soo horjeedda, kororka qiimaha digiraha iyo khudaarta, oo hoos u dhacay sanadkii hore, marka la fiiriyo warbixintan rasmiga ah.
Gaadiidka, iyada oo lagu qiimeeyay -0,2%, afar meelood toban meelood meel ka hooseeya bishii hore, taas oo ay sabab u tahay xaqiiqda ah in qiimaha shidaalka iyo saliidaha uu kor u kacay wax ka yar bishan marka loo eego Janawari 2018.
Waqtiyada firaaqada iyo dhaqanka, oo kala duwanaanshahooda sannadlaha ahi uu hoos u dhacay siddeed meelood meel, illaa -0,9%, sababtuna tahay hoos u dhaca qiimaha xirmooyinka dalxiisyada, oo ka weyn bishan marka loo eego bishii Janaayo ee sannadkii hore.
Saamaynta xun ee tusmada
Dareenkan, waxaa jira qaybo soo saaray xog qancisa oo aan yareyn muddadan oo saameyn ku yeeshay sicirka nolosha ee koray. Tusaale ahaan, kan ayaa ah inaan hoos ku kashifno:
Dharka iyo kabaha, oo lagu qiimeeyay –15,4%, taas oo ka tarjumeysa saamaynta iibka xilliga qaboobaha. Saameyntiisa guud ee CPI waa –1,037.
Waqtiyada firaaqada iyo dhaqanka, oo kala duwanaanshahoodu -2,3% uu saameyn ku leeyahay –0,190, oo uu dhiirigaliyo, inta badan, hoos udhaca qiimaha xirmooyinka dalxiiska.
meesha lagu nool yahay, taasoo soo bandhigtay qiime -0,6% iyo saamayn –0,076, taasoo ka dhalatay hoos u dhaca qiimaha gaaska iyo, in yar, naaftada kululaynta iyo korontada.
Reerka, taas oo dhigaysa kala duwanaanshaheeda -0,5%. Hoos u dhaca ku yimid qiimaha alaabada dharka ee guryaha ayaa si muuqata uga dhex muuqda isbeddelkan. Saameynta kooxdani ku leedahay tusmada guud waa -0,028.
Hoteello, maqaaxiyo iyo maqaaxiyo, oo qiimahoodu -0,2%, oo saamayn ku leh -0,022, waxaa sababay hoos u dhaca ku yimid qiimaha adeegyada hoyga. Sidoo kale waa in la ogaadaa, in kastoo jihada ka soo horjeedda, kor u kaca qiimaha maqaayadaha.
Heerarka bulshooyinka ismaamula
Mid kale oo ka mid ah dhinacyada ugu habboon ee lagu xisaabtamayo sicirka qiimaha macaamiisha ayaa ah inaysan isku mid ahayn. Hadaanay ahayn, lidkeed, way kala duwan tahay beel ka mid ah ismaamulka kale mararka qaarkoodna xoog leh oo soo jiitay dareen badan, dhaqaaleyahannada iyo dadka isticmaala laftooda. Dareenkan, iyo sida ku cad xogtii rasmiga ahayd ee ugu dambeysay ee uu bixiyay Machadka Qaranka ee Tirakoobka (INE), waxaa iska cad in heerka sanadlaha ee CPI uu hoos u dhacay 14 beelood oo ismaamul ah bishii Janaayo marka la barbardhigo Diseembar oo ay ku hareen seddexda harsan.
Hoos u dhaca ugu weyni wuxuu ku yimaadaa Castilla-La Mancha, leh dhibic shan meelood toban meelood. Dhinacooda, bulshooyinka ilaaliya sicirkooda sanadlaha ah waa Illes Balears, Comunidad Foral de Navarra iyo País Vasco. Iyada oo calaamad u ah dabacsanaanta dhaqaalaha iyo in guud ahaan CPI guud ahaan ay go'aamiso mid ka mid ah xuduudaha ugu habboon ee ku saabsan xaaladda caafimaadka ee dhaqaalaha qaranka. Tusaale ahaan, kiiskan midka Isbaanishka. Marka laga soo tago tixgelinta kale ee farsamo ee ay tahay in lagu falanqeeyo maqaal kale oo ku saabsan sicirka qiimaha macaamiisha.
Iswaafajinta Qiimaha Iswaafajinta (HICP)
Waa nooc kale oo ka mid ah tusmada qiimaha macaamiisha waxayna u jeeddaa tilmaame tirakoob oo ku saabsan muhiimad gaar ah oo ujeeddadeedu tahay inay bixiso cabir guud oo sicir barar u oggolaanaya isbarbardhigga caalamiga ah. Marka in sidan oo kale ay sidoo kale macquul tahay in la baaro u hoggaansanaanta arrintaan looga baahan yahay Heshiiska Maastricht gelitaanka Ururka Lacagta. Marka laga eego aragtidan, waxay noqon kartaa halbeeg dhaqaale oo saamayn weyn ku leh qiimaha nolosha ee waddan.
Dhinaca kale, waa in la ogaadaa in bishii Janaayo ee la soo dhaafay heerka isbeddelka sanadlaha ah ee HICP uu istaagay 1,0%, laba meelood meel toban meelood ka hooseeya oo diiwaangashan bishii hore. Sidaa darteed, kala duwanaanta bil kasta ee HICP muddadan la falanqeeyay waa -1,7%. In kasta oo liddi ku ah, bisha Janaayo heerka isbeddelka sannadlaha ah ee CPI ilaa Canshuuraha Joogtada ah (CPI-IC) waxay taagan tahay 0,9%, toban meelood hal meel wuu ka yaryahay ta uu diiwaangaliyay guud ahaan CPI. Heerka kala-duwanaanta bil kasta ee CPI-IC wuxuu ahaa -1,4% muddadan la falanqeeyay. Dhinaceeda, HICP ee Canshuuraha Joogtada ah (IPCA-IC) waxay soo bandhigeysaa qiime sanadle ah oo ah 1,0%, oo lamid ah tan HICP.
Indices qiimaha kala duwan
Sidaad ku aragtay maqaalkan, mid ka mid ah astaamaha CPI waa in lagu soo bandhigo qaabab kala duwan, sida Canshuuraha Joogtada ah (IPCA-IC). Taasina waxay kaa caawin doontaa inaad yeelato aragti badan oo dhab ah oo ku saabsan xaaladda dhaqaalaha qoyska. Layaab maleh, kaliya kordhinta gawaarida wax iibsiga, laakiin xaaladda dhabta ah ee amaahda amaahda ama xitaa kharashka ka dhaca alaabada dawooyinka. Taasna waxaa loo isticmaali karaa in dawladuhu ay ku qaadaan tallaabooyin dhaqaale ama xitaa shaqooyin ama tallaabooyin gargaar oo loogu talagalay qaybaha bulshada ee ugu liita.
Sidaa darteed, sicirka sicirka macmiilku aad buu uga khuseeyaa kuwa badan oo adeegsadayaal ah oo markii hore aaminsan. Si ka duwan kaaga saamaynta maalgashiga lagu horumariyey suuqyada sinnaanta. Meesha ay ku sii yaraanayaan sababo kala duwan oo mowduucyo kale looga hadli doono. Sikastaba xaalku ha noqdee, kama caawineyso xad dhaafka ah qiimaha suuqa saamiyada inuu sare u kaco ama hoos udhaco iyada oo ku saleysan xuduudahan dhaqaale. Sida lagu arkay indhoolayaasha waaweyn ee suuqyada sinnaanta.
Natiijooyinka ganacsiga ee suuqa saamiyada
Natiijooyinka ganacsi ee kaliya ee shirkadaha ku taxan suuqyada sinaanta ayaa saameyn badan ku leh suuqa saamiyada. Dareenkan, macluumaad aad u muhiim ah ayaa ah in shirkadaha sameeya Ibex 35 la xiray sanadkii hore a korodhka macaashka. Xogtaan waxaa ka mid ah natiijooyinka 35ka shirkadood ee ka kooban xulashada. Shirkadaha liistada lihi waxay ku guuleysteen inay ka adkaadaan guryo aad u adag iyo jawiga adag ee dhaqaale ee ay marayaan. Laakiin heerka koritaanka faa iidadiisa waa la gaabiyay marka loo eego laba iyo tobankii bilood ee 2017.
Shirkadaha waaxda korontada ayaa mar kale horseed ka noqday macaashka, iyadoo kororku ku dhowaad 5%, iyo kororka dakhliga ee 9%, marka loo eego 4% kharashyada. Kuwani waa xog ay raacayaan maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah kuwaas oo saamayn weyn ku leh caafimaadka dhaqaale ee shirkadaha laftooda marka loo eego qiimaha nolosha. Taasna sidoo kale waxaa lagu dabaqi karaa suuqyada kale ee caalamiga ah ee sinnaanta, sida lagu muujiyay sanadihii la soo dhaafay. Taasina waxay go'aamisaa in daqiiqad ay jirto wax iibsi ama iibis cadaadis.
Shirkadaha liistada lihi waxay ku guuleysteen inay ka adkaadaan guryo aad u adag iyo jawiga adag ee dhaqaale ee ay marayaan. Laakiin heerka koritaanka faa iidadiisa waa la gaabiyay marka loo eego laba iyo tobankii bilood ee 2017.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » IPC: waa maxay sideese saameyn ugu yeelaneysaa maalgashiga?
La wadaag iibsadayaasha: Maxay u noqdaan wax?
Fursadaha maalgashi ee sinaanta